Nolosha Youtubers waxaa laga heli karaa Steam loogu talagalay Mac | Waxaan ka socdaa mac
Ciise Arjona Montalvo | | Ciyaaraha
Youtubers Life waxaa laga heli karaa noocyadeeda Helitaanka Hore, taas oo ciyaarta fiidiyowgu ay isku dhexjirto noocyada maalqabeennada, iyo jilidda nolosha ee aad u baahan doontid inaad noqotid blogger video ugu weyn abid. Waxaad u baahan doontaa inaad wax ka beddesho fiidiyowyada, aad u hesho macaamiil kanaalkaaga oo aad ku guuleysato caan. Ciyaarta ayaa gabi ahaanba daaran Español, iyo Steam-ka waa ku kacaa 14,99 €. Dib u eegista ciyaarta waa mid aad u wanaagsan.
Abuur dabeecadaada oo habee kumanaan isku dhafan ah oo aad bilowdo inaad ka daawato fiidiyowyadaadii ugu horreeyay aqalkaaga waalidiinta aad ku soo barbaartay Duub ciyaar ciyaar, iibso qunsuliyadaha gadaal iyo Jiilkii ugu dambeeyay, oo aad ku guuleysatid hawl maalmeedkaaga oo aad la xiriirto bulshada si aad u kordhiso caan ka ahaantaada taageerayaasha, adiga saaxiibtinimada, adiga Familia iyo maaraynta waqtiga ee ciyaartu ku siiso. Kadib markaad akhriska sii wadato waxaan kuu daynaynaa a Ciyaarta ciyaarta, si aad u aragto sida dhaqdhaqaaqa ciyaarta u socdo.
Samee fiidiyowyo kuu gaar ah:
Waxaad u baahan doontaa wax ka bedel fiidiyowyadaada weligaa sidaa uma quusin, iyo daabacdo shabakadahaaga. Ciyaarta waxaad sameyn doontaa ka iibso ciyaaraha aad jeceshahay khadka tooska aht, ku aqbal guriga oo bilow duubista kulannadaada ciyaaraha. Kordhi fiidiyowyadaada maaddaama aad noqotid blogger-kii ugu weynaa ee abid abid jira.
ka shuruudaha ugu yar waxa aad u baahan tahay inaad ku ciyaarto waa kuwan soo socda:
SW: OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Libaaxa Buurta, Libaaxa.
Processor: 2 GHz ama processor dhakhso badan
Xusuus: 2 GB oo RAM ah.
Sawirro: 512MB Xusuusta Video.
Kaydinta: 3 GB oo bannaan bannaan
Waad iibsan kartaa ciyaarta 'Nolosha Nolosha' uumi adoo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Nolosha Youtubers waxaa laga heli karaa Steam for Mac
Jose Manuel Sánchez (@jamesor) dijo
Waxaan ku iibsaday mac, fontkana lama aqrin karo waxay soo baxaan fagaarayaasha ...
Jawaab José Manuel Sánchez (@jmgor)
Dave Khatar: Ugu laabo 80-meeyadii App Store